Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Paul Pogba Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhdayada Paul Pogba wuxuu soo bandhigayaa warbixin buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Carruurnimada, Nolosha Hore, waalidiinta, Xaqiiqda Qoyska, Xaaska, Caruurta, Nolosha Qofka iyo Noloshaada. Si fudud, waxaan ku siinaynaa falanqeyn buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Nololeed, laga soo bilaabo Pogba waagii hore ilaa markii uu caan noqday.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay waxa uu ku qurux badan yahay iyo awoodda weerarka ee xoogga leh, laakiin qaar ka mid ah ayaa ka fakaraya Paul Pogba's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Paul Pogba Taariikhda Carruurnimada:
Paul Labile Pogba wuxuu ku dhashay 15th March ee 1993 Lagny-Sur-Marne, Faransiis. Waxa uu ku dhashay hooyadiis Congo, Yeo Moriba iyo aabihiis Guinean, Fassou Antoine oo labadooduba u guuray Faransiiska iyagoo raadinaya daaqsinno xayawaan ah intii lagu jiray horraantii 1990s.
Pogba waxaa la siiyey dhalashada ilaa Bilaha kadib markii waalidkiis ay u haajireen Faransiiska, horumarin ah oo ay ku heleen joogitaankooda joogtada ah ee dalka. Ka hor inta uusan dhalashada Paul Pogba, Yeo (Pogba's hooyadiis) waxay lahayd labo mataano ah oo mataano Florentin iyo Mathias (Walaalaha Paul Pogba) kuwaas oo ku sugnaa Conakry, Guinea (dalkooda hooyo ee Afrika) ka dib markii ay waalidkood u guuraan Faransiiska ka hor inta aysan ku biirin qoyska reer Faransiiska sanadihii dambe.
Xaqiiqooyinka Qoyska ee Paul Pogba:
Paul Pogba wuxuu ka yimaadaa guri 'Testosterone', oo ah guri ay ku badan yihiin ragga. Fassou Antonie Pogba (Pogba Paul Pogba) waa nin daacad ah oo nabad ah. Ma ciyaaro wax badan oo ka mid ah ganacsigiisa wiilkiisa (Kubadda cagta), Paul Pogba ayaa sannado badan ku guuleystay inuu xiriir la yeesho isaga. Si kastaba ha noqotee, Pogba wuxuu la wadaagaa xiriirka adag ee hooyadiis.
Ku saabsan Paul Pogba hooyadiis:
Hooyo Paul Pogba (Yeo Moriba Pogba) waa maskaxda ganacsi ee ka dambeysa xiddiga ugu qaalisan adduunka. Halkaan 'supermum' (sawirka hoos ku qoran) ayaa ka caawiyay inay kor u qaadaan wiilkeeda saddexda wiil ee koray si ay noqdaan ciyaaryahano xirfad leh.
Xiriirka ay la leedahay wiilkeeda son Paul Pogba wuxuu ahaa mid khaas ah oo bilaash ah. Waxay hubisay inuu ku riyaaqay faa'idooyinka ah inuu yahay ilmo dhashay ugu dambeyntii iyo sidoo kale adagtay oo isaga laftiisa. Xilligaas, waxay u dhaqantay si ka duwan wiilkeeda kale.
Ku Saabsan Walaalaha Paul Pogba:
Ciyaartoyda da'da yar ee kubada cagtaMathias iyo Florentin) mar walba 'gadaashiisa ayuu helay. Waxay sidoo kale hubiyaan in walaalahooda kalyaha (wakhtigaa) ay qaadaan marxalada dhexe ee dhacdooyinka sida muuqata sawirka hoose.
Taariikhda Paul Pogba- Sanadaha Hore ee Kubadda Cagta:
Paul Pogba wuxuu bilaabay xirfadiisa kubada cagta markii uu da'diisu ahayd lix jir wuxuuna u ciyaaray Mareykanka Roissy-en-Brie, oo ah naadi kubadda cagta ah oo dhowr mayl koonfur ka xigta magaaladiisa.
Wuxuu todobo xilli ciyaareed ku qaatay kooxda ka hor inta uusan ku biirin kooxda Torcy, halkaasoo uu ka ahaa kabtanka kooxda ka tirsan kooxda 13.
Ma ahan wax yar kahor intuusan ku biirin akadeemiyada caanka ah ee Le Havre isagoo 13 jir ah isla markaana soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican oo soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub markii uu ku sii gudbay kooxaha da'da.
Taariikh nololeedka Paul Pogba - Wadada loo maro Sheekada:
Markii Pogba uu ku dhawaaqay inuu ku biirayo United sanadkii 2009, Le Havre wuu yaabay wuxuuna Red Devils ku eedeeyay inay bixiyaan "Aad u ballaaran" wadarta lacagta - iyo guri - waalidiinta Pogba si ay u dhammeeyaan qandaraaska hore ee horey u jiray.
Le Havre waxay u aragtay horumarka aan la saarin oo aan la dabooli Karin naadiga horyaalka heerka koowaad adoo siidaaya war cad oo ku saabsan cabashooyinkooda.
"Waqtiyada ay kooxo badani ka hadlaan 'Ganacsiga Ilma yaryar', Manchester United ayaanan ka walaacsaneyn in ay xayiraan 16-sano jir ah."
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa lagu ganaaxay wax walba oo qalad ah FIFA iyadoo Le Havre ay dooratay inay racfaan ka qaadato, lakiin waxa ay ku celcelisey waddooyinkii diblomaasiyadeed markii ay heshiis la galeen Red Devils.
Paul Pogba ayaa sanadihii ugu danbeeyay ee xirfadiisa ciyaareed ee Manchester United u ciyaaray kooxda Manchester United oo ka timid 2 ilaa 2009. Waxay United joogtay in Pogba uu kulmay islamarkaana sameeyay Jesse Lingard saaxiibkiisa ugu fiican. Jesse (Sawirka hoose ee Pogba) wuxuu xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay Manchester United sanadka 2000-2011.
Taariikh nololeedka Paul Pogba - U kac sheekooyinka caannimada:
Pogba ayaa seddex sanno ku qaatay United ka hor inta uusan ciyaarin kulankiisii ​​ugu danbeysay ee uu ku biiray Juventus, koox uu ku caawiyay inuu ku guuleysto afar horyaal oo Serie A ah, iyo sidoo kale dhowr Coppa Italia iyo Supercoppa Talyaani.
Cayaartoydiisa ayaa xaqiijiyay inuu ku laabanayo Manchester United lacag rikoorka rikoorka ah ee 89.3 Million Pounds ee 2016. Laba sano kadib, wuxuu ka mid noqday ragga 23 Kooxda Faransiiska taasoo ku guuleysatay 2018 World Cup Ruushka. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Jacaylka Paul Pogba:
Paul Pogba ma ahan mid ka mid ah inuu ka xishoonayo inuu la soo baxo gabdho qurxoon, xaqiiqda u muuqata in uu doorto inuu haysto wag ama gabar saaxiib ah oo magaceeda lagu magacaabo Maria Salaues.
Maria Salaues waa tusaale u ah xirfaddan oo ku salaysan Miami, horumar ah taas oo ku adkeyneysa in ay ku soo booqato qalbigeeda ku jirta Manchester. Inkastoo xiriirka Pogba uu la leeyahay Bolivian-23-da sannadkii hore, ayaa labada ciyaaryahanba waxa ay sameeyeen dhowr fure oo muhiim ah oo muujinaya heerka ay gaareen ciyaarta jacaylkiisa.
Dadkii ugu horreeyay ee ka soo baxa waqtigoodii shukaansiga ahaa waxay ku jireen 2017 markii ugu horeysay ee la isku arko. Xiddiga horay usii jeeda ee 2018 Maria Salaues ayaa u muuqday in ay xiran tahay waxa u eg sida giraangirnimo, iyada oo kursiga ka fadhiistay Pogba Hooyo oo ku taala magaalada Moscow ee Luzhniki Stadium intii ay socotay ciyaaraha koobka adduunka ee France oo ay la ciyaarayaan Denmark.
Paul Pogba Asal ahaan Qoyska - Jabka Dhirta ee Xoog:
Paul Pogba waa uu ku dhufan karaa kubada cagta. Shakhsi ahaan sida uu qabo cilmi-baarayaashu waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan jilbaha xidigaha madow ee sida Maraykanka ah Kobe Bryant kuwaas oo ka yimid dhiigga xoogga. Paul Pogba ayaa ah mid xoogan oo awood weyn u leh kubada cagta, dabeecadiisii ​​uu ka sameeyay kubada cagta.
Ballanqaadka uu ku gudajirayo kartidiisa wuxuu ogyahay wax xuduud ah mana aha horumar hore. Wuxuu u shaqeyn jirey jimicsi iyo dhakhtarka jimicsiga jirka tan iyo markii uu ka tagay Faransiiska da'da 16. Fiisiyotarabistaha iyo cunto yaqaanka cuntadu wuxuu hubiyaa inuu helo dareenka saxda ah ka dib ciyaaraha isla markaana wuxuu hayaa jadwal adag xilliyada fasaxa ah.
Paul Pogba Hawlaha Nolosha-Gaarka Ka Dib-Hawlaha:
Paul Pogba wuxuu sameynayaa tababarkan adag si uu u wanaajiyo awoodiisa wakhti dheer oo uu ku soo kabsado, islamarkaana uu ka caawiyo hagaajinta xirfadaha farsamada iyo badbaadada. Xirfadiisa kickboxing wuxuu muujinayaa sida uu diyaar ugu yahay inuu wax ka qabato khatar kasta oo uu ku socdo.
Sida laga soo xigtay Bawlos;
"Qof kasta oo isku dayaya inuu igu kiciyo waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco xaalad xun"
Paul Pogba Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan faahfaahin aan sax ahayn -Dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka
Pogba wuxuu soo dhaweeyay taageerayaasha dhowr talaabo oo qoob ka ciyaar ah oo uu u isticmaalo damaashaadka mar kasta oo uu dhaliyo. Paul Pogba ayaa loo arkaa inuu hoosta ka xariiqo qoob-ka-cayaar cusub oo uu la leeyahay saaxiibkiisa Jesse Lingard.
Heesta labada nin ee qoob-ka-cayaarayay waxaa lagu heesay mar uu ahaa fanaan ku dhashay Nigerian, Wizkid.
Paul Pogba Taariikh nololeedkiisa- Sheekada Xirfadaha Caalamiga ah
Pogba ma uusan qarxin kooxda koowaad ee reer France. Wuxuu bilaabay muuqaalkiisa Les Bleus oo ka yimid heerka U16 ilaa U20 'Espoirs'.
Saacadiisii ​​ugu fiicneyd waxay timid 2013 markii uu hoggaaminayay Faransiiska si uu ugu guuleysto koobka U20 World Cup. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa kabtan u ahaa xulkiisa, isagoo rigoore ka qasaariyay finalkii Uruguay, waxaana loo magacaabay ciyaaryahanka tartanka.
Paul Pogba ayaa sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta Addidas Golden Ball inta lagu guda jiro Koobka Koobka Aduunka ee FIFA U-20 Koobka Aduunka ee u dhexeeya Faransiiska iyo Uruguay oo lagu qabtay Ali Sami Yen Arena bishii July ee 13, 2013, Istanbul, Turkey.
Paul Pogba ee Walaalaha Kubadda Cagta ee Walaalaha:
Ma ogeyd?… Walaalaha waaweyn ee Faransiiska ee walaalihiis ah Florentin Pogba iyo Mathias Pogba labadoodaba waa labada ciyaaryahan iyo mataano isku mid ah.
Florentin Pogba (bidix) iyo Mathias Pogba (Midig)
Waxay labadooduba ku dhasheen dalka Guinea. Florentin Pogba (sawirka bidix waa kabtanka haatan ee Guinea) sida waqtiga qorista.
Ku Saabsan Paul Pogba Waalidkiis:
Sida hore loo sheegay, Pogba aabihiis waa Guinean halka hooyadiis ay ka timid asal ahaan Congo. Labada wiilba waxay leeyihiin xiriir xushmad leh. Si kastaba ha ahaatee, hooyada Paul Pogba ayaa la sii joogi doonta talaabo kasta oo uu ku guuleysto. Dadku waxay dareemaan raaxaysi si ay u ilaaliyaan muuqaal hooseeya oo aysan ku lug yeelan hawlihii wiilasha.
Paul Pogba Mummy iyo Daddy
Mar uun, Manchester United waxay £ 85,000 u dirtay labada waalid midkood si uu ugu biiro wiilkiisa Paul Pogba si uu ula joogo 2009. Ma ogtahay? Labaduba waxay aqbaleen lacagta. Tani waxay aragtay wiilkooda ugu horeeyay ee Manchester United.
Taariikh nololeedka Paul Pogba- Sida hooyadiis u saameyn ku yeelato wareejintiisa:
Waxaa badanaa lagu soo gaabiyaa 'Supermum iyo ganacsiyada ganacsiga kubada cagta ee dhalay wiilka Paul Pogba oo ku biiray malaayiin doolar oo maaliyad ah.
Mrs Yeo Moriba waxaa lagu xantaa inay aheyd wakiilka wiilkeeda, maamulaha iyo la taliyaha. Waxay sidoo kale u ciyaareysaa doorka isku midka ah ee labadoodaba labadoodaba (Florentin iyo Mathias) labada ciyaaryahan ee Guinea.
Waxay halkaa istaagtay inkastoo cadaadis ka yimid Alex Ferguson ay ku qancisay inay wiilkeeda u ogolaato inay joogaan kooxda. Markii la weydiiyay kulanka ay la yeeshay Ferguson, Yeo Moriba ayaa ku qoslay sidii ay u soo celisay mid ka mid ah munaasabado badan oo ay la yeesheen macalinkii hore ee Man United oo ay ka horjoogsadeen mustaqbalka wiilkiisa Paul Pogba.
Sida laga soo xigtay iyada,
"Marka Ferguson yimaado gurigeyga ... Waxaan hubaa inuu ka tagayo niyad jab. Marwalba waan u sheegay, wiilkaygu Bawlos ma saxiixayo. Taas awgeed, Ferguson wuu riixay, ma uusan ciyaarin, Ilmahaygu wuxuu ahaa kali. Waxa uu xitaa ku qayliyay xafiiskiisa Ferguson sida uu u daaweyn lahaaed. Paul Pogba ayaa ka careysnaa taas Paul Scholes ayaa dib ugu soo laabtay lixdii bilood ee uu ciyaaraha ka fariistay bishii January 2012 si uu u badbaadiyo booska khadka dhexe ee United. Kaliya 18 xilligaas oo kaliya labo kulan oo uu u muuqdo magaciisa oo uu ku ciyaaro League Cup, Pogba wuxuu dareemay in fursad la siin doono. Tani waxay sameeyeen wiilkeyga ayaa go'aansaday inuu ka tago kooxda ".
Waxay sii waday ...
Inkasta oo dhammaan dhibaatooyinkeena, mucjiso ayaa weli dhacday. Wiilkeyga ayaa noqday mid deg deg ah Juventus. Maalmahan waa inaad dhahdaa wax yar ayaan ka yaqaanaa kubada cagta, waxaan noqon karaa hooyo caadi ah laakiin qofna ma i joojin karo ganacsigan, "
Mrs Yeo Moriba Pogba ayaa weli iska diiday inay noqoto hogaamiyaha rasmiga ah ee maamulaha wiilkiisa. Sida ay sheegtay;
"Waxaa la i weydiistay oo kaliya talo, taas oo dhan waa. Paul wuu ixtiraamaa, wuu dhageystaa wax kasta oo aan u sheego. "
Taariikhda Paul Pogba- Khilaafka kala dhexeeya Alex Ferguson
Intii uu joogay Manchester United, Paul Pogba ayaa loo yaqaanay ereyada gaajada;
'Waxaan doorbidaa DIE intii aan kubada cagta ciyaarin'.
Isagu waa cabsi la'aan. Waxa uu fashilmaa marka uu ka lumo fursad uu u qalmo. Waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartoy dhowr ah oo cabsi la'aan ah oo kubad heysata si uu ugu soo socdo tababare Sir Alex Ferguson inuu dhaho;
'' Sir, waxaan u maleynayaa inaan heysto wax ku filan, I soo ciyaari, oo waan ku tusi doonaa haddii aan diyaar ahay ama aan ''.
Shabakada Fekradda hoose, Paul Pogba ayaa ku eedeeyay Manchester United "Ixtiraam la'aan", isagoo sheegay inuu sameeyay kaliya inuu tababar u qaato inta lagu jiro murankiisa qandaraaskiisa oo ka horeeyay inuu ku biiro Juventus,gabadhii hore '.
Paul Pogba Diintiisa:
Awoodda faransiisku waa mid ku dhaqma diinta islaamka iimaanka. Badanaa waxaa la arkaa isagoo tukanaya hadallo kooban ka hor kulammada.
Paul Pogba ee Jacaylka Islaamka.
Inkastoo uu ahaa ciyaaryahan kubad sameeyaha ah, Paul Pogba wuxuu leeyahay dhaqanka Islaamka oo xoogan garoonka dhexdiisa. Wuxuu raacaa oo u ixtiraamaa dhaqanka Carabta.
Magaca Paul Pogba ee loo yaqaan 'Nicktus': Sababta uu u leeyahay 'Octopus':
Qaar badan oo daawaday Pogba oo dhan, mid ka mid ah ayaa u fiirsan lahaa dhowr dheeraad ah oo dheeraad ah oo lugaha dheer ee dheer lugaha iyo xoog dabiiciga ah oo uu weli u isticmaali maanta ee weerarka iyo difaaco.
Xiddigihiisa 6.3 cagaha boodhka ah iyo dhererkiisa ayaa ku faraxsan taageerayaal badan oo kubada cagta ah. Tani waxay ahayd sababta taageerayaasha loo magacaabay magaciisa ("Bawlos Octopus"). Magacani waxa uu keenay natiijada lugaha dheer iyo dabacsan. Taageerayaasha ayaa aaminsan in lugihiisa ay u eg yihiin dharka tareenka octopus marka uu wax ka qabanayo, uu socdo, qallal-celin iyo ku-soo-boodo mudo-dheer.
Walaalayaal mataano ah ee Pogba ayaa jecel inay u yeeraan 'Pogboom'taas oo ay uga mahadcelisay dadaalkeeda dheer ee goolka. Tani waa naaneeyn ku qoran boorsadiisa.
Asalka Magaca Paul Pogba:
Magaca 'Bawlos octopus'wuxuu ka soo jeedaa Octopus caan ah oo loo isticmaalay inuu saadaaliyo ciyaaraha inta lagu guda jiro 2010 World Cup. Paul (Hada oo Dhamaystiran in ay dileen Global Sports Betting Milyaneerka) si guul leh u saadaaliyay ciyaaraha kubada cagta adduunka. Bawlos, oo ku tiirsan sanduuqa ayaa ka dhigan in dalku uu ku guuleysan doono ciyaarta soo socota.
Paul Pogba Taariikh nololeedkiisa- Booska LifeBogger
Waa u qalantaa in la sheego in ciyaaryahan Paul Pogba uu u matalo kubada cagta adduunka. ma aha oo kaliya timaha iyo dareenka dharka dharka, laakiin qaabka uu u ciyaaro wuxuu ka dhigayaa inuu ku jeclaado jiilka FIFA-Vine. Raadi hoos, qiimeynta Paul Pogba lifebogger.
Waad ku mahadsantahay akhrinta Paul Pogba Hore Caruur Sheeko iyo xaqiiqooyin aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Abdoulaye Doucoure Sheeko Xeeldheer Wacan Xaqiiqo Weyn